बिराटनगरका हाटबजारको व्यवस्थापनमा महानगर असफल ! | Makalukhabar.com
बिराटनगरका हाटबजारको व्यवस्थापनमा महानगर असफल !
पुस २७ , बिराटनगर । सडकमा लाग्ने साप्ताहिक हाटबजारलाई हटाई तिनलाई व्यवस्थित बनाउने योजना ल्याएको विराटनगर महानगरपालिका यसको कार्यन्वयनमा असफल बनेको छ ।
सडकमा लागेका हाटबजारले दुर्घटना बढेको, अत्यावश्यक सवारी आवगमनमा समस्या आएको तथा हटियाबाट निस्केको फोहोरले दुर्गन्धित भएको गुनासो आएपछि महानगरपालिकाले गत असारमा चालु आर्थिक वर्षको साउन सम्ममा सडकमा लाग्ने हाटबजार हटाउने निर्णय गरेको थियो । तर निणर्य गरेको ६ महिना बिति सक्दा पनि महानगर भित्रका दुई वटा हटियामात्र सडकबाट बाहिर लग्न सकेको छ ।
बिराटनगर महानगरपालिकाभित्र गुद्री बजार सहित जम्मा १८ स्थानमा हाटबजार लाग्दै आईरहेका छन् । जसबाट महानगरले वार्षिक १२ लाख राजस्व असुली गर्ने गरेको छ । सडकमा हाटबजार लगाउँदा बिभिन्न समस्या उत्पन्न भएपछि महानगरले सडकभन्दा बाहिर खाली जग्गाको व्यवस्थापन गरेर खाली जग्गामा हाटबजार लगाउने योजना बनाएको हो । तर लामो समय बित्दा पनि हटिया व्यवस्थापन नहुनुले महानगरको योजना नै विफल भएको आशंका उब्जिन थालेको छ । महानगरले हाटबजार हटाउने कुरा गरिरहँदा महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि नै लाग्ने ठूलो हटिया अहिले सम्म व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
तर महानगरका मेयर भीम पराजुली भने साउन सम्ममा हटाउने नभई साउनबाट व्यवस्थापन थाल्ने महानगरको योजना रहेको बताउँदै आवश्यक व्यवस्थापनको काम भईरहेको बताउँछन् । हाटबजार सडकबाट हटाउने नभई व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको उनको भनाई छ । मेयर परमजुलीले भने ‘ हामीले साउन १ गतेदेखी सुरु गर्ने भनेको हैन, साउनदेखी चाही व्यवस्थापन गर्ने भनेको हो । हामीले धेरै वडाहरुमा त्यसको व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ । केही वडामा स्थानको अभावमा बाँकी छ । हिजो सडकमै हटिया लाग्ने गरेको थियो भने अहिले केही सारेर व्यवस्थापन गरेको अवस्था छ । खाली ठाउँमा हटिया व्यवस्थापन गर्ने हो हटाउने कुरा हैन ।’ हाटबजार ब्यबस्थापनका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्था मिलाउने र समन्वय गर्ने काम वडाध्यक्षहरुलाई जिम्मा दिईएको छ ।
तर, वडाध्यक्षहरुले यसका लागि पहल थालेको देखिन्दैन । सडक नालाको निर्माण कार्यले गर्दा व्यवस्थापनमा समस्या आएको बिराटनगर महानगरपालिका वडा नं ५ का वडाअध्यक्ष मीनकुमार आर्चाय बताउँछन् । उनले भने ‘अन्य वडाहरुमा चाहिँ भएको छ जस्तो लाग्छ यो वडाको सन्दर्भमा चाहि निर्णय भएर कार्यान्वयन नभएको जस्तो देखिएको छ, यहाँ अहिले सडक तथा नाला निर्माणका कारणले व्यवस्थापनमा समस्या आईरहेको छ । निर्माण कार्य सकिना साथ हामी त्यो काम गर्छौँ ।’
हाटबजारमा व्यापार गर्ने स्थानिय व्यापारी पनि हाटबजार व्यवस्थित गर्नेबारे जानकारी नगराएको बताउँछन् । महानगरले सडकको हाटबजार हटाउने योजना ल्याएर आफूहरुको कमाई खाने बाटो बन्द गर्न खोजेको उनीहरुको गुनासो छ । विराटनगरका विभिन्न हाटमा तरकारी व्यपार गर्दै आएका लक्ष्मण सोनीले हटिया व्यवस्थापन गर्ने विषयमा आफुलाई कुनै जानकारी नभएको बताउदै सडकमै पसल गरेको धरै वर्ष भएको बताए ।
उनले भने ‘हामीले धरै वर्षदेखी यहि सडकमै लाग्ने हटियामा तरकारी बेचेर परिवारको गुजारा गर्दै आएका छौँ । हटिया हटाईए हाम्रो त बिजोग हुन्छ । हामीलाई व्यपार गर्न महानगरपालिकाले ठाउँ दिनु पर्यो ।’ त्यस्तै अर्का व्यपारी सन्तोष साहले आफुहरुको अन्य कुनै रोजगार नरहेकाले हटिया हटाईए बेरोजगार बन्ने बताए । उनले भने ‘ हम्रो अरु केही रोजगार छैन । रोजगार भनेकै यहि पसल हो यही पसलबाट आफ्नो र परिवारको पेट पाल्नु परिरहेको छ । अब हटिया हट्यो भने हाम्रो हालत के हुन्छ ? त्यो महानगरपालिका र भिम पराजुलीले बुझी दिनुपर्छ ।’